देशभर कहाँ–कहाँ कति क्षति ? « Khabarhub
देशभर कहाँ–कहाँ कति क्षति ?
काठमाडौं– मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढी बस्तीमा पस्दा हजारौँ घर डुबानमा पर्नुका साथै भौतिक क्षति भएको छ । झापाको कन्काईमा ११०, बिर्तामोडमा २६, शिवसतासीमा १२ र कमलमा १६ घरमा पानी पसेको छ । झापामा १६४ घर डुब्दा लाखौँको क्षति भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, मोरङको विराटनगरमा ८५, बुढीगंगामा १३ रतुवामाईमा १०, सुन्दरहरैचामा २ घर डुबेका छन् । मोरङका अन्य केही स्थानमा पनि डुबान भएको छ ।
उता ओलढुंगामा ३ दिनदेखि विद्युत अवरुद्ध हुँदा सञ्चार सम्पर्क टुटेको छ । प्रहरीसमेत सञ्चार विच्छेदको अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ ।
यता, सप्तरीको सप्तकोशीमा २५ घरमा पानी पसेको छ । यसैगरी, मौली पुलमाथि पानी बग्दा सडक अवरुद्ध भएको छ भने खडक च्यापिन पुल दक्षिणपट्टि भाँसिएको छ । हनुमान नगर, सप्तकोशी, डाक्नेश्वरी छिन्नमस्ता रुपनीलगायतका क्षेत्रमा १२० घर बाढीमा डुबेका छन् ।
धनुषामा कमला नदीको बाँध जनकनन्दनीमा फट्दा १५० घर डुबानमा परेका छन् । उक्त क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
यस्तै, महोत्तरी जिल्लाको पुरै होचो भाग डुबानमा परेको छ । प्रहरी कार्यालय र कारागारमा पनि बाढी पसेपछि समस्या भएको छ ।
सर्लाहीमा २५ सय घर डुबानको चपेटामा परेका छन् । मलंगवालगायत जिल्लाका अधिकांश होचा भाग डुबानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ । जिल्ला विगत २५ वर्ष यताकै ठूलो बाढी आएको बताइएको छ । बाढीका कारण विद्युत आपुर्ति पनि बन्द भएको छ ।
यसैगरी, रौतहट जिल्लाको लाल बकैया नदीमा बाढी आउँदा ठूलो क्षति भएको छ । राजपुरामा ३०, राजदेवीमा ८०, दुर्गा भगवतिमा ७, ईशनाथमा २५ घरमा पानी पसेको छ । यस्तै, बाराको जितपुरसिमरामा ८५ र फेटामा १३० घरमा बाढी पसेको छ ।
सिन्धुलीको हरिहरपुरगढीमा ४ घरमा पानी पसेको छ । ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको छ । चिवतनको रत्ननगरमा २० र राप्तिमा २० घरमा पानी पसेको छ ।
प्रकाशित मिति : २८ असार २०७६, शनिबार ३ : ३४ बजे